कुनै बेला लाहुर जान ठिक्क परेका अमित बराल बन्लान् त नेपाल आइडल ? – Everest Dainik
कुनै बेला लाहुर जान ठिक्क परेका अमित बराल बन्लान् त नेपाल आइडल ?
काठमाडौं, मंसिर १८ । नेपाल आइडल सिजन-२ को उपाधि भिडन्त नजिकिएसँगै बाँकी पाँच प्रतिस्पर्धी थप तयारीमा जुटेका छन् । उनीहरु अझैं स्रोता-दर्शकको मन जित्ने गीत प्रस्तुत गर्न थप तयारीमा जुटेका हुन् ।
उपाधि जित्ने-नजित्ने दर्शकको हातमा रहेकाले ‘दमदार’ प्रस्तुति दिने विश्वासका साथ बाँकी पाँच प्रतिस्पर्धी कडा तयारी गरिरहेका छन् । आइडलमा रवि ओड, अमित बराल, सुमित पाठक, बिक्रम बराल र अस्मिता अधिकारी बाँकी छन् । उनीहरुबाटै अब एकजना आइडल छानिने छन् ।
यी पाँच प्रतिस्पर्धीबाट को बन्ला त आइडल ? पक्कै अहिले नै जवाफ दिन निकै कठिन छ । कठिन यसकारण भएको छ कि सबैको प्रस्तुति ‘उत्कृष्ट’ छ । यसैबीच, ‘बुटवल अडिसन’ बाट नेपाल आइडलमा सहभागिता जनाएका अमित बराल पनि ‘आइडल’का मुख्य दाबेदार हुन् ।
त्यो गीतले मात्रै होइन उनले अन्य अंकमा दिएका प्रस्तुतिले पनि स्रोतादर्शकको मन जितेका छन । यसकारण पनि उनी पनि उपाधि जित्न सक्छन् । अब हेर्दै जाउ उनको यात्रा कहाँ पुग्छ ।
ट्याग्स: Amit Baral, Butwal, nepal idol